RASMI: Bruno Fernandes Oo Abaal-marin Kale Ku Garaacay Maguire, Ighalo Iyo Fred – Cadalol.net
Bruno Fernandes ayaa halkiisa kasii wada abaal-marinada shaqsiga ah ee uu ku guuleysanayo intii uu ku biiray Manchester United, waxaana maanta loo doortay markii labaad xiddigii ugu fiicnaa Red Devils bishan March oo kulamo kooban ay kooxdiisu dheeshay.
Xiddiga reer Portugal oo United ay €55 milyan kaga soo iibsatay Sporting CP bishii January, ayaa qaab cajiib ah ku bilowday waayihiisa Red Devils, waxaana bishii ee February uu ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiican bisha ee Premier League iyo xiddiga Manchester United ee bishaas.
Abaal-marintii saddexaad ayaa maanta uu hantiyey, waxaana loo doortay xiddigii ugu fiicnaa Manchester United bishan March, kaddib markii uu qayb laxaad leh ka qaatayy guushii ay kooxdiisu kasoo hoysay saddexdii kulan ee Everton, Manchester City iyo LASK.
Ciyaartii Everton ay United ku karbaashtay 2-0, isaga ayaa caawiyey labadaba, kulankii Man City na waxa kubbad uu si layaab leh uga dulqaaday daafaca City uu lugta u saaray Martial oo isaguna shabaqa ku hubsaday, sidoo kalena waxa uu wacdaro dhigay ciyaartii Europa League ee ay 5-0 ku xasuuqeen LASK oo uu gool dhaliyey, caawimo na loo diiwaangeliyey.
Tan iyo markii uu yimid Old Trafford, waxa uu dheelay sagaal kulan oo uu dhaliyey saddex gool, waxaanu abaal-marinta bisha March ku garaacay saddexda laacib ee Odion Ighalo, Harry Maguire iyo Fred oo kula tartamayay.